रातिको खानापछि फलफूल खानु उचित कि अनुचित ? « Kakharaa
रातिको खानापछि फलफूल खानु उचित कि अनुचित ?
१९ कात्तिक, एजेन्सी । हामीमध्ये अधिकांश व्यक्तिलाई रातिको खानामा केही मिठो अथवा गुलियो खानेकुरा खान मन लाग्छ । स्वभाविकै हो, यदि तपाईं आफ्नो शरीरको वजन कम गर्न थाल्नु भएको छ भने गुलियो खाने तलतललाई कुनै फलफूलबाट पुरा गर्नु पर्नेछ । फलफूलहरु प्रायः स्वास्थ्यवद्र्धक, रसिलो, पोषणले भरिपूर्ण, प्राकृतिक रुपमै गुलियो तथा कुनै मिठाई अथवा चकलेटभन्दा धेरै गुणा उत्कृष्ठ हुन्छ । त्यसो त, सधैं के कुरामा बहस हुन्छ भने राति फलफूल खानु कत्तिको सही हो ?